Boligrådgivning Danemark - Købersmægler - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Efa nahita ny an-trano ihany koa, amin'ny faran'ny herinandro Isika review rehetra ejendomsdokumenter, ny fividianana fifanarahana, progress report, eo an-toerana drafitra, ejerforeningsvedtægter, andelsboligforeningsregnskab, snsAfaka manoro hevitra ianao amin'ny zavatra azo atao tsara sy ny momba ny vokatry ny afa-po. Ny mpivarotra ny real estate agent miantoka ny mpivarotra tsara indrindra ny teny, ary mety ho farany ambony indrindra vidiny.
Isika dia azo antoka, na izany aza, fa ny mpividy hahazo ny tsara indrindra tsy azo atao ho an'ny ambany indrindra azo atao ny vidiny.
Inona maro mpividy tsy mahalala dia ny hoe ny real estate agent irery ny hanao ny mpivarotra ny liana. Mpividy mieritreritra fa diso ny mpivarotra ny broker dia tsy maintsy ihany koa ny manoro hevitra sy hitari-dalana azy ireo. Ankehitriny mafy orina ny lalàna per Janoary, fa ny broker ihany no manatanteraka ny mpivarotra ny zavatra mahaliana. Boligrådgivning Danemarka ihany no mihazona ny zavatra mahaliana sy azo antoka ny mpivarotra ny broker dia hahazo fanehoan-kevitra, ary mahazo ny tsara indrindra fifanarahana azo atao. Isika køberrådgivere amin'ny manam-pahaizana manokana ny fahaiza-manao ao anatin'ny ejendomsjura sy ny toe-karena. Isika dia ny"mpanohitra"ny mpivarotra ny realtor Izahay manao asa ao amin'ny famindram-po sy azo antoka fa ara-dalàna sy ara-bola ao tsara toerana ao amin'ny fifampiraharahana. Misy andian-teny raikitra any amin'ny fividianana fifanarahana izay milaza hoe,"ny real estate agent manatrika ho afa-tsy ny mpivarotra ny tombontsoa, sy ny mpividy efa namporisika ny mikatsaka manokana ny torohevitry"Rehefa sonia ny antontan-taratasy, dia nanamafy fa ny mpivarotra ny realtor dia tsy ny lehilahy, ary afaka manao izay tsara indrindra ho an'ny mpivarotra. Mety ho lasa tena ratsy tranga rehefa afaka izany, raha misy zavatra tsy mety mandeha, satria na dia eo aza ny fanaovan-tsonia ny tahirin-kevitra dia nanamafy fa izy dia tsy ny vadinao, ary manaiky ianao fa mety ho azo antoka ny tsara indrindra azo atao varotra ny mpivarotra. Raha toa ny mpivarotra ny real estate agent mijoro ho asa fanomanana sy ny refusionsopgørelse. Eto dia ny mpivarotra ny mpanolotsaina mamaritra raha ny fividianana vidiny dia mba ho afaka, ary refusionsopgørelse mba ho vonona, sy ny fomba ny rakitsoratra dia tokony ho tafiditra ao amin'ny izany. Ny mpividy eto dia tsy maintsy toy izany koa ny fanaraha-maso ny fifanarahana toy izany ny mpanolo-tsaina izay manatanteraka io asa io, izany hoe. Ny real estate agent ihany no tokony ho manaiky ny mpivarotra mba ho afaka hamoaka ny vidiny izany.
Raha misy ny tsy fitovian-kevitra ara-bola tamin'ny dingana izany eo ny mpivarotra sy ny mpividy dia tsy afaka ny hanery ny mpivarotra mba hanaraka ny andraikitra, ohatra, ny handavany koa ny hiara-ny vidin'ny fividianana amin'ny manontolo na amin'ny ampahany.